रोज्नुहोस् ढाँचा - खाली स्थान
कोटि बटन प्रयोग गर्नुहोस् सूत्र तत्व निश्चित गर्नका लागि जहाँ तपाईँ स्पेसिङ निश्चित गर्न चाहनुहुन्छ. संवाद को देखावट चयन कोटिमा आधारित छ. पूर्वदृश्य सञ्झ्यालले सम्बन्धित बाकसहरू मार्फत कुन स्पेसिङ परिमार्जन भयो भनेर देखाउँदछ ।
स्पेसिङ परिवर्तन गर्न तपाईँलाई यो कोटि चयन गर्नका लागि यो बटनले अनुमति दिन्छ.
चल र सञ्चालनकर्ताहरू बीचको स्पेसिङ परिभाषित गर्दछ, पङ्क्तिहरू बीचमा, रमूल चिन्हहरू र रेडिकलहरू बीचमा
सुपरस्क्रिप्ट र सुपरस्क्रिप्ट अनुक्रमणिकाहरूका लागि स्पेसिङ परिभाषा गर्दछ ।
फ्र्याक्सन पट्टी र न्युमरेटर वा डिनोमिनेटर बीचको स्पेसिङ परिभाषित गर्दछ ।
फ्र्याक्सन पट्टीको अधिक लम्बाइ र पङ्क्ति तौल परिभाषा गर्दछ ।
लम्बाइ विस्तार गर्नुहोस्
योगफल प्रतीक र सीमा अवस्थाहरूको स्पेसिङ परिभाषित गर्दछ ।
कोष्ठकहरू र सामाग्री बीचको स्पेसिङ परिभाषित गर्दछ ।
अधिक साइज (बायाँ/दायाँ)
सबै कोष्ठकहरूको माप गर्नुहोस्
सबै प्रकारको कोष्ठकहरू मापन गर्नुहोस्. यदि तपाईँ पछि प्रविष्ट गर्नुहुन्छ (aover b) आदेश सञ्झ्यालहरूमा, कोष्ठकहरूले तर्कको सम्पूर्ण उचाइ घेर्दछ. You normally यो प्रभाव प्रविष्ट गरेर पूरा गर्नुहोस् बायाँ (aमाथिbदायाँ ).
बढी भएको साइज
म्याट्रिक्समा तत्वहरूका लागि सम्बन्धित स्पेसिङ परिभाषित गर्दछ ।
चलहरू सँग सम्बन्धित प्रतीकहरूको स्पेसिङ परिभाषित गर्दछ
सञ्चालनकर्ताहरू र चलहरू वा सङ्ख्याहरू बीचको स्पेसिङ परिभाषित गर्दछ ।
सूत्रमा किनारा थप गर्नुहोस् । यो विकल्प विशेष प्रयोगशाली छ यदि तपाईँ सूत्र इन्टिग्रेट गर्न चाहनुहुन्छ LibreOffice लेखकको पाठ फाइलमा सेटिङहरू बनाएको बेला, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईँ साइजको रूपमा ० प्रयोग गर्नुहुन्न, जसबाट पाठको लागि दृश्य समस्या निर्माण गर्दछ जुनले घुसाएको बिन्दु घेर्दछ ।
Title is: खाली स्थान